waxaa maamula 20-03-23
Laga bilaabo Juun 6-deedii ilaa 8-deedii 8aad, Bandhigga Aan loo Magacan Tekin Tech Asia Fair waxaa lagu qabtay Delhi. Sida mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu xirfadda badan, Kooxda PEIXIN waxay noqotay mid caan ah oo caan ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helnay goosasho wanaagsan. Dad aad u badan ayaa ogaanaya annaga oo ku muujinaya xiise weyn mashiinnadeenna. Iyo ...
Laga bilaabo Juun 28-keedii illaa 29-keedii, Bandhigga Teknolojiyada Hindiya ayaa lagu qabtay magaalada Mumbai. Sida mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu xirfadda badan, Kooxda PEIXIN waxay noqotay mid caan ah oo caan ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helnay goosasho wanaagsan. Dad aad u badan ayaa ogaanaya annaga oo ku muujinaya xiise weyn mashiinnadeenna. Iyo adeeg bixiyahaaga ...
Peixin wuxuu ka soo qeyb galay ANDTEX 2019 magaalada Bangkok, Thailand
ANDTEX 2019 waa dhacdada meesha kuwa soosaarayaasha iyo soosaarayaasha alaabada injineeriga ah, baarayaasha, adeegsadayaasha, iyo hogaamiyaasha wershadaha ee adduunka oo idil ay iskugu keenaan inay sahamiyaan hodantinimada fursadaha ganacsi ee cusub ee loogu talo galay dadka aan duuliyaha ahayn iyo waxyaabaha nadaafadda lagu tuuri karo ee Koonfur Bari Aasiya. Koonfur-bari Aasiya waxay ka kooban tahay 1 ...
Peixin waxay kaqeyb qaadatay IDEA 2019 Bandhig aan lagaraneyn oo laga sameeyay Miami USA
IDEA® 2019, waa munaasabada ugu horeysa ee aduunka ee loogu talo galay dadka aan qaan gaarin iyo xirfadleyda dharka sameysa, ayaa soo dhoweeyay 6,500+ kaqeybgaleyaal iyo 509 shirkado ah oo muujinaya 75 wadan oo idil iyo silsiladaha dharka lagu farsameeyo si ay xiriir ganacsi usameeyaan usbuucii lasoo dhaafay Miami Beach, FL. The 2 ...
Peixin wuxuu kaqaybqaatay NON WOVEN EXPO BANGLADESH
Laga bilaabo Juun 27-keedii illaa Juun 29-keedii, NON WOVEN EXPO Fair ayaa lagu qabtay Dhaka. Sida mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu xirfadda badan, Kooxda PEIXIN waxay noqotay mid caan ah oo caan ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helnay goosasho wanaagsan. Dad aad u badan ayaa ogaanaya annaga oo ku muujinaya xiise weyn mashiinnadeenna. Iyo taageeradaada w ...
Lady Pad Machine , Pull Up Machine , Khadka Wax Soosaarka Mini Pad , Mashiinka Nadaafadda Maalinlaha ah , Mashiinka Wetes Wipes , Panty Liner ,